ပင်လယ်နက်ဒေသ RayHaber | raillynews
စာဖတ်ခြင်း၏အရေးကြီးမှုကိုဂရုပြုရန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသည်ဆမ်ဆမ်တွင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြသည်။ ငါ Ondokuz Mayısတက္ကသိုလ်ငါစီမံချက်အသိုင်းအဝိုင်းကစီစဉ်သောလမ်းရထားတွင်စာအုပ်ဖတ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုဖြင့်စာဖတ်ခြင်း၏အရေးပါမှု [ပို ... ]
Giresun စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးသမားများအသင်း (GISIAD) သည် Giresun ကျွန်းရှိကေဘယ်လ်နှင့်အဏ္ဏဝါစီမံကိန်းများစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ GİSİADဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည်မြို့တော်ဝန် Aytekin Şenlikoğluနှင့်အနည်းဆုံး ၄၀၀၀ သို့သွားရောက်ခဲ့သည် [ပို ... ]
ဆမ်ဆန်မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Mustafa Demir ကမနက်ဖြန် (၁၃း၃၀) တွင်ကစားမည့်Yılport Samsunspor - Amed Sportive Activities ပွဲအတွက်ပရိသတ်များအတွက် ၁၀ မိနစ်မှ ၁၆.၃၀ အတွင်းအခမဲ့ဖြစ်သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ သမ္မတမူစတာဖာ [ပို ... ]
ဆမ်ဆမ်ပြည်သူများအားအရည်အသွေးပြည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုထောက်ပံ့ရန်SAMULAŞ A.Ş. သည်၎င်း၏အရည်အသွေးကိုသူရရှိသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအရည်အသွေးကောင်းတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပဲ" ဟုအထွေထွေမန်နေဂျာ Enver Sedat Tamgacıကပြောကြားခဲ့သည်။ ကော်ပိုရိတ်တန်ဖိုးများနှင့်ဥပဒေရေးရာစည်းမျဉ်းများမူဘောင်အတွင်း [ပို ... ]
ဆမ်ဆန်မက်ထရိုပိုလီတန်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Mustafa Demir က "ဆမ်ဆန်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးစနစ်ကတော့လျှပ်စစ်တာယာသုံးဘီးတပ်ဘတ်စ်ကားစနစ်ဖြစ်သည်။ " Samsun မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Mustafa Demir၊ [ပို ... ]
ဘတ်စ်ကားမောင်းသူများသည်နံနက်ခင်း၌သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသမ္မတကိုယ်တိုင်Zorluoğluကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Trabzon မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Mustafa Kurtuluş, TULAŞ A.Ş. Arif, အထွေထွေမန်နေဂျာ [ပို ... ]
မနေ့ကဖြစ်ခဲ့သောနှင်းကျခြင်းကြောင့်နိုင်ငံသားများခံစားနေရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကိုတားဆီးရန်ဆမ်မလမ်အဖွဲ့များသည်နံနက်တိုင်အောင်လမ်းလျှောက်ကြသည်။ မိုးသည်းထန်စွာနှင်းကျသဖြင့်ထိရောက်သောဆမ်ဆန်ရှိဘတ်စ်ကားလိုင်းများနောက်ကျခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် [ပို ... ]
Amasya Mehmet Sarı၏မြို့တော်ဝန်, RAYSİMAŞရထားစနစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အတိုင်ပင်ခံ Inc. tram စီမံကိန်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Amasya Mehmet Sarı, TCDD နှင့်TÜRKSAT၏မြို့တော်ဝန် [ပို ... ]
Şamandarမြန်နှုန်းမြင့်ရထား၏ပံ့ပိုးမှုများ Bolu မှရှင်းပြသည်
Düzceတက္ကသိုလ်နည်းပညာဌာနမှူး ဒေါက်တာ Ayhan Şamandarကတူရကီကျောက်မီးသွေးတွင်း Bolu ဌာနခွဲတွင် 'မြန်နှုန်းမြင့်ရထား၏ပံ့ပိုးမှုများ Bolu' ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ညီလာခံတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ သူပေးခဲ့သောကွန်ဖရင့်၌အန်ကာနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အကြားအမြင့်ဆုံးကိုစီစဉ်ခဲ့သည် [ပို ... ]